Last updated: Jan. 06 2018 | 3 Maminitsi verenga
Vakaroorana vakawanda kuzviziva nechekare: ukama hunogutsa kunoda nguva uye simba inivhesitimendi. Nepo vamwe vakadzidza nenzira yakaoma, vamwe kunzwisisa kubvira pakutanga kuti munhu haagoni kuva rinogutsa ukama pasina kuva norugare pakuzvichengetedza kutanga. Kana uri kutarisa ukama hwako uye unonzwa hamusi kufara nechiverengo zvazviriwo ikozvino, unofanira kuziva kuti zvakanaka pokutangira kunatsiridza zviri pachako. Self kukura uye munhu kukura vari kiyi kwete bedzi ufare, asiwo kuti inofadza uye upenyu hunogutsa sezvo vaviri. Haugoni kuchinja pachako kana wako ukama mune aparadzane wechipiri, asi pano pane dzimwe pfungwa nezvazvo:
1. Mufaro unobva mukati
Kuti zviri kutaurwa, unofanira kuziva kuti mudiwa wako kuti chinangwa bedzi muupenyu hakusi kuti ufare apo iwe ugere uye hapana vanoita nezvazvo. Achitarisira mufaro kungokonzera kugogodza pasuo wako pane benzi. A rinogutsa ukama kunosanganisira vanhu vaviri vanoremekedza uye hanya nemumwe. Mumwe nemumwe anotora chinhu kubva ukama, asi kunounzawo chinhu mariri. Nepo rudo kunogona kuva bofu uye kusiko, haina kuva udyire. saka, usatarisira mumwe kuti ufare. Vanopedzisira pachako; kudzidza kufara kuti kupa wenyu nemudzimai vafare.
2. Bvisa danda kubva muziso rako
Wekare shoko anotidzidzisa tanga wabvisa puranga riri kubva kwedu ziso, kana tichida kuona zvakajeka uye chete pashure kubvisa rubanzu kubva womumwe ziso. Izvi zvinorevei? kutanga uzvione mugirazi, wanikidza uye edza kushanda zvaunokanganisa asati Zvairatidza mudiwa wako kuti misshapes. Pasina pakunyanya Ukuwo uye kuenda nokuda kuzvigutsa mhosva, akacheka mudiwa wako vamwe usimbe, kurega his / her ose chete kutama kuburikidza rinokudza girazi, uye edza kunzwisisa zviito zvavo panzvimbo pakutongawo. nguva Next une kunyange zvishoma vaviri kunetsana, pane kuedza kuisa mhosva munhu, zvibvunze zvamaita zvakaipa. Edza kuwana nzira yokudzivisa kunetsana, uye, kana zvakadaro kusawirirana kukamuka, kufunga mhinduro kurigadzirisa norugare.
3. Ramba wakadzikama yako
Naizvozvo ukama zhinji zvakaipa akatendeuka chete nokuti vaviri vakava nemafungiro wemhare. A rinogutsa ukama haisi hondo. Haufaniri kurwisa mumwe wako kana kuti kuverenga kukunda kwako somunhu yepamusoro mamakisi haangaiti kukubatsira kufara. pachinzvimbo, edza kuramba wakadzikama kwako uye kushivirira mudiwa wako. Funga kuti mumwe wako haasi muvengi wako, uye pose uchida kusimudza izwi rako, tora befu uye mungazvidzora. Mirira kusvikira imi muri kutaura izvozvo kuburikidza chinyararire, uye nokukurumidza kuona migumisiro.
4. Nheyo utano kuti ukama hwenyu
Sezvinoita imba yakasimba inovakwa pamusoro nheyo yakasimba, ukama hunogutsa inovakwa pamusoro utano ndivo. Izvi zvinoreva here kuti kuva akatendeseka kuti mudiwa wako uye, zvikuru kukosha, pachako kubva pakutanga. Sei zvakawanda kwazvo kuti adzi- kuti kuvanza zvaunokanganisa kana uchironga ramangwana pamwe chete? Vamwe vachazopedzisira cherechedzai dzenyu pfungwa simba. Wati wambofunga kuti mumwe wako kuti chaizvoizvo rudo urwo imi kuti ufunge hunonyengera?
5. Usakanda mapfumo pasi hope dzako
Ndiani akuudza kuti kuti kuva rinogutsa ukama uye kufara unofanira kurega kurota kwenyu? Kana uchifunga kuti izvi mudiwa wako kuti chido, pane vaviri nzira: kana iwe vamuwanazve wake / zvakaipa, kana zviri kwete MUNHU. kana noudyire, kana kusazvida vanoumba nemaonero akanaka kuti ukama rinopindirana. Mukupesana, ane utano rudo kudyidzana zvinoreva kuti vaviri rutsigiro uye kurudziranai kutevera hope dzavo. Kana ukasarudza kuti pachako zvido zvenyu uye zvinangwa havasi kukosha, nokukurumidza kuti tisuwe uye kuzadziswa. Ko ichi apo uchida ukama hwako kuti vaienderei?